मोडल अञ्जली अधिकारीको जीवनमा के भयो यस्तो ? होश छाडेर यस्तो अवस्थामा देखिएपछि देख्नेहरु नै छक्क, परिवारका सदस्यहरु चिन्तित – Gazabkonews
मोडल अञ्जली अधिकारीको जीवनमा के भयो यस्तो ? होश छाडेर यस्तो अवस्थामा देखिएपछि देख्नेहरु नै छक्क, परिवारका सदस्यहरु चिन्तित
आखिर प्रेमनै सबै भन्दा ठुलो रहेछ। आमा बुवाको प्रेम अनि आन्तरिक प्रेममा निकै फरक छ तर माया गर्ने जोडीलाई भने माया नै ठुलो रहेछ।यहि प्रेममा कतिपय सफल भयका छन् भने कतिपयले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको हामीले सुन्न अनि देख्न सक्छौ। हुन त मायाप्रेम बिना संसार नै अधुरो रहनछ। मिठा मिठा सपना बोकेर हिडेका ति परेवाका जोडी जस्तै एक जोडीमा घटेको घटना हो। मायाले पागल बनायो दुरी बढायो तर माया भने उत्तिकै रहिरहेको छ। एक अर्कालाई खोज्दै भौतारियाका ति नमुना जोडीले समाजबाट नै धोका पाउन पर्यो। यस्तै यस्तै घटनाले आज कतिपय जोडीको बिछोड भयको छ भने कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेका छन्।
यस्तै घटनालाई कल्पित गर्दै गित मार्फत उतारेका छन् कलाकारहरुले। लोकप्रिय गायिका शान्ति श्री परियार र गायक कुशल बेलबासे को सुमधुर आवाजमा उनै बहुचर्चित गायक तथा सर्जक कुशल बेलाबासेकै लय तथा शब्द सिर्जनामा एक हृदयाबिदारक कथामा आधारित लोक गित हातैको पन्जाले बजारमा सार्बजनिक भयको छ।भिडियो तर्फ प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका छन् भने नवराज उप्रेतीले छायांकन गरेका छन् र बिष्णु शर्माले उक्त भिडियो सम्पादन गरेका छन्। उक्त भिडियोमा ओबी रायमाझी र अन्जली अधिकारीको मन छुने अभिनय रहेको छ।उक्त गीतलाई नवराज पन्तको आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्बजनिक गरियको छ। बिछोडियका जोडीको मिलन भयो कि भयान होला ? आखिर कहिले सम्म यस्तो समस्यामा अल्झनु पर्ने साचो माया गर्ने जोडी ?भिडियो:-
यो पनि पढ्नुहोस्:-विदेशी एयरलाइन्सहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा अबदेखि इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० हजार फिटमाथिको नेपाली आकाशमा विदेशी जहाजहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला गर्ने तयारी गरेकोे हो ।प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति प्राप्त विदेशी एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् “उड्ययन प्राधिक्णबाट सहमति ल्याउने विदेशी एय्लाइन्सलाई हामी ‘नो अब्जेक्सन’ दिन्छौँ”, उनले भने ।
विदेशी जहाजमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने सेवासम्बन्धी प्रस्ताव यति बेला प्राधिकरणको बोर्डमा प्रस्तावित छ । बोर्डबाट उक्त प्रस्ताव पारित हुनासाथ जहाजमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने सुविधा खुला हुनेछ । “अब छिटै यस्तो सुविधा दिने गरी तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।यो प्रक्रियामा प्राधिकरणको भूमिका ‘नो अब्जेक्सन’ दिनेमा हुनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।